Mampitroatra Ny Fivavahana Mpitahiry ny Nentindrazana Ao Malezia sy Singapaoro Ny ‘Fotoam-Pelaka’ Vaovao Ao Amin’ny Disney · Global Voices teny Malagasy
Mampitroatra Ny Fivavahana Mpitahiry ny Nentindrazana Ao Malezia sy Singapaoro Ny ‘Fotoam-Pelaka’ Vaovao Ao Amin'ny Disney
Voadika ny 21 Marsa 2017 11:55 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Ελληνικά, Deutsch, русский, 日本語, Français, Italiano, English
Tontolon'ny Walt Disney, Florida. Sary: Flickr / CC 2.0
Tsy faly mikasika ilay famerenana mamokatra arahana hetsika mivantana ilay sarimihetsika Disney ”Ilay Vehivavy Tsara Tarehy Sy Ilay Bibidia’‘ ireo vondrona ara-pinoana sy ny fanjakana mpanao sivana ao Singapaoro sy Malezia.
Any Singapaoro, ireo mpitarika kristiana dia nanoro hevitra ireo mpino mba ”hiaro” ireo zanany amin'ilay heverina ho ”fandaharana manohana ny LGBT” an'ilay sarimihetsika, taorian'ireo tatitra fisianà ”fotoana pelaka” tao anatin'ilay sarimihetsika. Tany Malezia, nanaiky ny fampijerena ny vahoaka ilay sarimihetsika ny mpanao sivana ny sarimihetsika, fa nasiana ”fanapahana vitsy.”
Tantaram-pitiavana misy eo aminà vehivavy tanora sy lehilahy voaozona hiaina toy ny biby ao anaty lapa ilay tantara Vehivavy tsara tarehy sy ilay Bibidia. Nilaza tamin'ny haino aman-jery sosialy ireo mpamokatra ilay sarimihetsika fa manasongadina pelaka mpilalao ilay famerenana-famokarana.
Ny Filankevitra Nasionalin'ny Fiangonana ao Singapaoro dia naneho ny hatezerana hoe ”manary” ny ”fahadiovana manontolon'ilay” sarimihetsika Disney tamin'ny 1991 ilay sarimihetsika vaovao, tamin'ny fiampangàna ilay pelaka mpilalao, nolalaovin'ny mpilalao sarimihetsika, Josh Gad, ho toy ny ”tena tsy misy ilàna azy.” Namoaka fanambarana ofisialy ilay filankevitra mampitandrina ny vahoaka amin'ny fikasan'ny Walt Disney ”hanazatra amin'ny endri-piainana pelaka”:
Ireo mpitarika Kristiana sasany eto no tena manahy mafy mikasika ilay fanehoana LGBT ao anatin'ity sarimihetsika vaovao Disney ity. Toy ny fikasàna hitaona ny ankizy tanora no fahitàn'izy ireo izany, sy hifanerasera amin'izy ireo dieny mbola kely taona hanana fisainana hoe tsy olana ny fomba fiainana pelaka.
Namoaka fanambarana fohy ny Fiangonana Katolika ao Singapaoro mandrisika ny ray aman-dreny hahay hanavaka rehefa eo am-pijerena ilay sarimihetsika:
Miaraka amin'ny tatitra mivelatra kokoa nataon'ny haino aman-jery sosialy momba ilay heverina ho ‘fotoana pelaka’ ao anatin'ity sarimihetsika ity, mino izahay fa tokony hanavaka tsara ireo ray aman-dreny ary hieritreritra miaraka amin'ireo zanany ny fanontaniana hoe mifanaraka amin'ny fampianaran'i Kristia ve ilay fomba fiaina aseho. Tokony hohazavain'izy ireo ny fiantraikany sy ny vokatry ny fomba fiaina toy izany eo amin'izy ireo tenany sy ny fiarahamonina.
Any Singapaoro, voaheloka ny fihetsika pelaka eo amin'ny samy lehilahy.
Mandràra ny sodomia ihany koa i Malezia, ary ny Biraon'ny Sivana ao amin'ny firenena dia efa nanemotra amin'ny fotoana tsy voafetra ny fandefasana ilay sarimihetsika Vehivavy Tsara Tarehy sy ilay Bibidia, ampian'ireo ahiahy maharitra, eny fa na dia ireo dika an-tsoratra aza. Milaza ny Orinasa Walt Disney fa mampanao ”fandinihana anaty” izy mba hahafantarana bebe kokoa mikasika ny fipetrak'ilay sarimihetsika any Malezia.
Nandiso fanantenana maro tany Malezia mpankafy Disney ny fahamailoan'ny fanjakana manoloana ny fitarihana mamoafadin'ny Hollywood, izay nanelezan'ny minisitry ny kolontsaina ny ahiahin'izy ireo momba ny sivana tsy rariny.
Eny amin'ny tambajotra sosialy, naneho ny fahasorenany mikasika ny fanakànana ilay sarimihetsika ireo Maleziana, raha toa ka ny sasany hafa nankahatra ny Biraon'ny Sivana mba hanazava ny antony hanakanana ilay Vehivavy Tsara Tarehy sy ilay Bibidia tsy ho azo alefa any amin'ireo trano fijerena sarimihetsika, nefa sady mandray aminà lovia volafotsy sy mandefa amin'ny fahitalavitra izao karazana fialamboly misy herisetra rehetra izao.
— Nadzrin Nadzer (@NadzrinIqbal) 13 Martsa 2017
Tsy misy teny ho an'ny toe-draharaha miseho ho an'ilay Vehivavy Tsara Tarehy sy ilay Bibidia:
Tena diso fanantenana fotsiny fa hay dia mora tohina TOY IZANY i Malezia.
— y v o n n e (@yvnnexy) 13 Martsa 2017
”voasakana any malezia ilay vehivavy tsara tarehy sy ilay bibyiia noho ny fisehoan-javatra pelaka misy eo amin'ilay famantaranora sy ilay labozia.”
tiako ny fireneko
— Priyanka Laxmi (@priyankalaxmii) 13 Martsa 2017
Be zavatra tokony havaozina i Malezia nefa misafidy ny hijery ny zavatra kely kidaladàla toy ny fanakanana ilay Vehivavy Tsara Tarehy sy ilay Biby Dia isika. Maharikoriko tahaky ny inona.
— FranFeyn (@ravingcowmaniac) 13 Martsa 2017
Malezia, ilay tanin'izay mety hisy.
Voasakana ilay Vehivavy Tsara Tarehy sy ilay Bibidia raha toa ka mandeha amin'ny fahitalavitra ny WWE. Raha ny fahitàna azy dia mampiroborobo ny ady ny firenentsika, fa tsy ny fitiavana.